သရေစာအမြဲစားမိနေတဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ? – Trend.com.mm
Posted on November 20, 2019 by Noel
ကျွန်တော်တို့တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေထက် အရသာရှိပြီး အဆီများအသားများတဲ့အစားအစာတွေကိုပိုပြီးသဘောကျကြပါတယ်။အဲ့ဒီသရေစာတွေက ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီသရေစာတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့အထဲမှာတော့ မပါခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ ဒီသရေစာအမြဲစားမိနေတတ်တဲ့အကျင့်ကြီးကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ?
အိမ်မှာမြင်နေတွေ့နေရရင် လက်ကအမြဲအဲ့ဒီကိုရောက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဖြည်းဖြည်းချင်းစားမယ်ဆိုပြီးတောင်ကြိုတင်မ၀ယ်ထားသင့်ပါဘူး။စားပြီးရင်း ထပ်စားချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အားလပ်ရက်မှာ မုန့်စားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကယ်လိုရီနည်းတဲ့မုန့်ချပ်တွေ၊ဘီစကစ်ချပ်လေးတွေပဲ စားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်က အမြဲ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီမှာ သရေစာ စားဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါ လမ်းထလျှောက်လိုက်တာ၊အလုပ်တစ်ခုခုပြေးလုပ်လိုက်တာမျိုးလုပ်ကြည့်ပါ။အလေ့အကျင့်တစ်ခုက ချက်ချင်းတော့ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖျောက်ပါ။ကြာလာတဲ့အခါ ဗိုက်မဆာပဲ စားချင်နေတဲ့အာသီသကြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က သရေစာစားတတ်တဲ့အကျင့်ကိုလုံးဝမဖျောက်နိုင်ဘူးဆိုရင် သရေစာနေရာမှာ တစ်ခြားကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုအစားထိုးစားပါ။အစပိုင်းတော့ မတင်းတိမ်နိုင်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ညဘက်တွေဗိုက်ဆာတယ်ဆိုရင်လည်း အသီးအနှံလေးတွေစားပေးလို့ရပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကိုပဲ သေချာသတိထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် သရေစာအမြဲစားမိနေတဲ့အကျင့်ကြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အရင်ကထက် ပိုပိန်သွားလို့ Suzy ကို ပရိသတ်တွေစိတ်ပူနေကြ
မကြာခင် ထွက်ရှိတော့မယ့် Scoob!